Nahazo ny sehatry ny fampahalalam-baovao ny teorian’ny teti-dratsin’ny CIA avy amin’ny kolonely iray tao amin’ny tafika Yogoslavy taloha · Global Voices teny Malagasy
Nahazo ny sehatry ny fampahalalam-baovao ny teorian'ny teti-dratsin'ny CIA avy amin'ny kolonely iray tao amin'ny tafika Yogoslavy taloha
Voadika ny 06 Septambra 2019 4:54 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Shqip, srpski, English
Lahatsoratra mpivoaka isa-kerinandro avy amin'ny Vreme “Ahoana no nandresen'i Kolonely Karan ny ady manokana natao tamin'i Serbia”, mamakafaka ny teorian'ny teti-dratsy momba ny toeram-pitsikilovana ao amin'ny mpivarotra fiara sy fiara kilalao. Saripikan'i Meta.mk News Agency, CC BY.
Ity tantara ity dia niseho voalohany tao amin'ny Meta.mk News Agency, tetikasan'ny Metamorphosis Foundation. Navoaka eto ambany ny dika nasiam-panovana noho ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
Fampahalalam-baovao Serba maromaro no namoaka vao haingana ny lahatsoratra avy amin'ilay manamboninahitra miaramila efa misotro ronono izay mampiroborobo ny teoria heverin'ny olona ho teti-dratsy na diso. Milaza ilay teoria fa nivory tao amina mpivarotra fiara iray tao Skopje, renivohitr'i Makedonia Avaratra ireo sampan-draharahan'ny fitsikilovana ao amin'ny firenena Balkan mba hanomanana ny famonoana ireo mpitarika ny mpanohitra Serba ary avy eo manome tsiny ny governemanta amin'izany, izay anisan'ny teti-dratsy hanonganana ny filoha Serba Aleksandar Vučić.
Nosoniavin'i Ljuban Karan, kolonely KOS (Sampana Miady amin'ny Fitsikilovana ao amin'ny Tafi-bahoaka Yogoslavy taloha) 66 taona efa nisotro ronono ilay lahatsoratra, ary navoakan'ny gazety Serba mpivoaka isan-kerinandro  Pečat tamin'ny 19 jolay. Navoakan'ireo fampahalalam-baovao Serba maromaro, tahaka ny Novi Standard, ny gazety mpanaitaitra Informer, ary ny Večernje Novosti, indray avy eo ilay lahatsoratra, samy gazetim-panjakana avokoa ireo izay i Milan Vučelić, tompon'ny Pečat ihany koa no lehiben'ny tonian-dahatsoratra.
Mitondra ny lohateny hoe “Noose for Serbia” (teny ôrizinaly: “Омча за Србију”) ilay lahatsoratra ary miresaka momba ny fisian'ny “ady manokana” tarihin'ny OTAN amin'ny Serba, sy ny “hetsika miafina vaovao – Noose, izay ahitana drafitra voavolavola ho fandringanana an'i Serbia,” araka ny voalazan'ny lahatsoratra. Nilaza i Karan fa nandinika ny mety ho fisehoan-javatra amin'ny fanonganana an'i Vučić izy, ary mampitandrina ny mety hisian'ny famonoana ara-politika atao amin'ireo mpanohitra malaza (izay, hoy izy, ny governemanta no homena tsiny). Hoy izy nanoratra:
Ако се упитамо ко би могао бити мета, логично је да то буде неко од опозиционих лидера, можда чак и неко од оних који су под контролом Запада. Са становишта вођења специјалног рата, најефектније би било уклонити некога ко тренутно највише напада актуелну власт. Некога ко би више користио мртав, као „политичка жртва режима“, него као неуспешан опозиционар без подршке народа. Они који су се упустили у прљаве игре са западним обавештајним службама нису ни свесни у коликој су опасности да страдају од прљаве машинерије за коју раде и за коју верују да им користи.
Raha manontany ny tenantsika isika hoe iza no mety ho kendrena, dia lojika fotsiny amin'izany fa iray amin'ireo mpitarika ny mpanohitra, na angamba koa olona voafehin'ny Tandrefana mihitsy aza. Raha jerena amin'ny fananganana ady manokana, dia tena mandaitra indrindra ny fanesorana izay olona tena manafika mafy ny governemanta ankehitriny. Ny olona ilaina kokoa ho faty, ho toy ny “lasibatra ara-politikan'ny fitondrana”, fa tsy toy ny mpanohitra malaza tsy mahomby raha tsy manana ny fanohanan'ny olona. Na ireo izay miditra amin'ny lalao maloto miaraka amin'ny sampan-draharaha miady amin'ny fitsikilovana tandrefana aza dia tsy mahafantatra akory ny loza mety hihatra amin'izy ireo noho ny tetika maloto izay iasan'izy ireo mafy sy inoany fa misy ilàna azy.
Tsy namoaka ny loharanon'ny lahatsorany, no sady tsy nanome porofo mazava mba hanohanana ny filazany i Karan, izay efa olo-malaza ao Serbia hatry ny ela sy matetika maneho hevitra momba ny fomba fijeriny manohitra ny OTAN ao amin'ny haino aman-jery mpomba ny governemanta.
Raha niresaka tamin'ny gazety mpivoaka isan-kerinandro Vreme (laharana. 1491) momba ny teoriany, dia nilaza i Karan fa mifototra amin'ny “vaovao navoaka tamin'ny haino aman-jery” sy ny fandraisany izany ny fomba fijeriny. Tsy nofaritany hoe iza no tati-baovaon'ny haino aman-jery fihainony.
Nandritra ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety, naneho ny ahiahiny ireo mpitarika ny antoko mpanohitra Miara-dia ho an'ny Serbia (Savez za Srbiju) fa mampiseho fandrahonana ho azy ireo ny fiampangana nataon'i Karan ka nitaky ny hanaovana fanadihadiana izy ireo. Nilaza izy ireo fa an'ny fanjakana ny Večernje Novosti, iray amin'ireo fampahalalam-baovao izay namerina namoaka ilay lahatsoratra, ary nilaza ihany koa fa manana porofo izy ireo fa arahan'ny Ministeran'ny Atitany Serba maso hatramin'ny volana septambra 2018.
Raha niresaka tamin'ny Vreme, nilaza i Karan fa tsy te handefa fandrahonana ho faty ho an'ny mpanohitra izy, fa mba “hampitandrina” fotsiny momba ilay antsoina hoe ady manokana mamely an'i Serbia.
Lahatsoratry Vreme mpivoaka isa-kerinandro “Ahoana no nahazoan'ny kolonely Karan ny ady manokana mamely an'i Serbia,” sy ireo kilalao miaramila sasany. Sary avy amin'ny Sampam-baovao Meta.mk , CC BY.
Fivarotana fiara tafiditra amin'ny firaisana tsikombakomba manerantany voalaza fa mamely an'i Serbia
Nilaza i Karan fa samy nandray anjara tamin'ity teti-dratsy mamely an'i Serbia ity ireo firenena mpifanolo-bodirindrina: Kroasia, Bolgaria, Montenegro, Albania, Kosovo ary Makedonia Avaratra. Nambarany fa miasa ao amin'ilay fivarotana fiara any Skopje ny vondrona iray tarihin'ny CIA. Hoy izy nanoratra:
Од пре два месеца бугарска обавештајна служба укључила се у заједнички подривачки рад против Србије, а то је отприлике период када је активирана операција „Омча“. Њихови оперативци делују заједно са обавештајцима Македоније, Албаније и Немачке из центра у Скопљу, који је највероватније формирала ЦИА, а који је маскиран у оквиру представништва за продају аутомобила.
Roa volana lasa izay, tafidtra anatin'ny hetsika iraisana manokana amelezana an'i Serbia ny sampan-draharaha Bolgara miady amin'ny fitsikilovana, izay mitovitovy tamin'ny vanim-potoana nanombohan'ny hetsika “Noose”. Miara-miasa amin'ireo mpiasan'ny fitsikilovana avy any Makedonia, Albania ary Alemaina avy any Skopje, vondrona iray izay mety noforonin'ny CIA, ary mody lazaina fa mpivarotra fiara ireo mpiasa ireo.
Herinandro talohan'izay, ny 12 Jolay, nilaza tamin'ny tafatafa tao amin'ny RTS (fahitalavi-pirenena Serba) ny solombavambahoaka Progresista Serba iray, Milovan Drecun fa tokony hanazava manokana momba ny “ekipan'ny fitsikilovana matanjaka afenina toy ny mpivarotra fiara ao amin'ny mpanamboatra fiara tandrefana lehibe ao Skopje” ny praiminisitra Makedoniana Zoran Zaev. Toa sambany no nahitana filazana tahaka izany nataon'ny olo-malaza, ary mety ho fototry ny filazan'ilay kolonely efa misotro ronono izany.
Toa tsy mahafantatra ny vahoaka Makedoniana fa misy mpivarotra fiara ao Skopje izay mety ho foiben'ny hetsika mamely an'i Serbia. Mbola tsy nivoaka tamin'ny fampahalalam-baovao Makedoniana ny vaovao tahaka izany, na koa tombatombana ihany. Nilaza ireo mpanao gazety Makedoniana fa raha misy ao Skopje ny “mody ho mpivarotra fiara tahaka izany”, dia tsy azo inoana fa tsy ho fantatra izany. Indrindra indrindra fa tsy maintsy ho tsikaritry ny fampahalalam-baovao mpanakiana ny governemanta Makedoniana mpomba ny OTAN ankehitriny izany.
Vaovao faikany, mpandinika sandoka
Araka ny filazan'i Slobodan Georgiev, mpanao gazetin'ny Vreme, izay nanadihady an'i Karan, dia ny fisian'ny lahatsoratra toy izany indrindra no mampiseho fa “tafiditra tokoa amin'ny karazana ady manokana i Serbia, saingy ady ataon'ny fitondrana amin'ireo rehetra mieritreritra, milaza sy miasa tsy mitovy amin'i Vucic sy ny ekipany izany. “Araka ny filazany, amin'ity ady ity, ny haino aman-jery no mety mitana andraikitra lehibe indrindra.” Vaovao faikany, fampahalalam-baovao sandoka, mpanao gazety sandoka, mpikaroka sandoka – nameno ny sehatra fampahalalam-baovao Serba izy ireo, “hoy ny namaranan'i Georgiev .
Nandritra ny taona vitsivitsy lasa, ampiasain'ireo tabloida Belgrady maromaro, toy ny Informer na Srpski Telegraf, fantatra amin'ny famoahana vaovao diso momba ny firaisana tsikombakomba manerantany manohitra an'i Serbia ny teny hoe “noose (lamba fatorana)”. Matetika ireo fampahalalam-baovao ireo mampiroborobo ny hevitra fa tandindonin-doza ny filoham-pirenena Serba, ary nahazatra ny fampiasana ny fehezan-teny isan-karazany hoe “mifatotra eo amin'ny vozon'i Vucic ny “noose””.